gbasara Anyị – BSY-Plywood igwe,Veneer Peeling Line,Veneer Dryer,Plywood Hot Press,Log Debarker,Veneer Clipper,Glue Spreader,Pre Press maka plywood,Plywood onu trimming saw,Veneer Peeling Lathe
Ahịrị peeling nke veneer
4 akụkụ Planer
» Company Information » gbasara Anyị » gbasara Anyị
Tọrọ ntọala na 1956, Weihai Baishengyuan Industry Co., Ltd. (ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ osisi weihai mbụ) dị na ọmarịcha obodo Weihai, Shandong, China. Ọ bụ nchịkọta nyocha na mmepe, mmepụta, ngwá ọrụ ọkachamara ịzụ ahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ dị iche iche, ma nwee ikike nchịkwa nke mbubata na mbupụ. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mmepe, ụlọ ọrụ na-mgbe siri ọnwụ na-ụzọ nke onwe ha ọhụrụ, nkà mmụta sayensị mmepe. Ugbu a na-eduga ngwaahịa nke zuru ezu tent nke plywood mmepụta akara ngwá, inyeaka ngwaahịa, na-eso ahịa ina upgrading always.The ngwaahịa na-exported karịa 50 mba na mpaghara na Asia, Europe, Africa na America.
The Enterprise bụ National elu-tech Enterprise, Gafeworo GB/T19001-2016 àgwà management usoro asambodo na CE asambodo. Ọ nwere Provincial Enterprise technology development center, nnukwu woodworking ígwè technology research center, Shandong Province “otu ụlọ ọrụ na otu nkà na ụzụ” research center, obodo ulo oru imewe center, Weihai Wood-Dabere osisi laabu wdg O nwere 23 mba mepụtara patents, 25 ịba uru. Ikike ihe nlereanya, ụkpụrụ ọkachamara 10 nyere ntụziaka. Ụlọ ọrụ ahụ meriri “Shandong Province nke atọ nke Sayensị na Nkà na Ụzụ Ọganihu”, nke mbụ na-esetịpụ ebe a na-elekwasị anya na ngwaahịa ngwá ọrụ nkà na ụzụ Shandong na ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ. Nrite mbụ nke rụzuru pụtara ìhè na Teknụzụ Innovation, “Nrite mbụ nke ngwaahịa ọhụrụ magburu onwe ya” “ihe nrite nke abụọ nke sayensị na teknụzụ nke ụlọ ọrụ china” “ihe nrite mbụ nke ihe nrite ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ngwaahịa ọhịa china na onyinye ndị ọzọ”. BSY ika veneer rotary peeling line na CNC spindleless rotary peeling lathe ka achọpụtara dị ka ngwaahịa ika ama ama na Shandong Province.
The Enterprise bụ osote onye isi oche nke China Forestry Machinery Association so na Administrative unit nke China igwe ngwá ọrụ Association, ọhịa ngwá ụlọ ọrụ mba ọhụrụ mmekọ director unit, Shandong elu-ọgwụgwụ ngwá ọrụ ụlọ ọrụ otu nkeji, China woodworking igwe ngwá ọrụ ụlọ ọrụ “top iri” ụlọ ọrụ maka mmepụta ihe ọhụrụ nke onwe, nke mbụ nke obere ụlọ ọrụ obere na ọkara “ndị mmeri zoro ezo” na Shandong Province.
BSY na-enye igwe dị iche iche nke gụnyere osisi plywood, log debarker, veneer single-spindle rotary lathe, veneer spindle-less rotary lathe, veneer dryer, plywood press, plywood edge Trimmer, plywood Sander wdg.
A na-enye ọrụ na ọzụzụ site n’aka ndị ọrụ zụrụ azụ nke ndị na-ere ahịa BSY, ma ọ bụ ozugbo site n’aka ndị na-ahụ maka ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ebumnuche anyị bụ mgbe niile ịnye naanị akụrụngwa na ọrụ kacha mma. Ọzọ, nabata na BSY Industry Group. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ adịghị na webụsaịtị a, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.